नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या ५०७ पुग्यो « Sajilokhabar
नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या ५०७ पुग्यो
काठमाडौँ, ९ जेठ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोनाभाइरस पुष्टि हुने व्यक्तिको सङ्ख्या ५०७ पुगेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले शुक्रबार दिउँसो थप २० जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितकोब संख्या पाँच सय ७ पुगेको जानकारी दिए ।
डा. देवकोटाका अनुसार सेती प्रादेशिक कैलालीका २१, २३ र २६ वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो । उनीहरु सरस्वती मावि क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । डडेल्धुराका २८ वर्षीय पुरुष, बैतडीका २२ वर्षीय पुरुष, बाँकेका १४ जना १८ देखि ६१ वर्षसम्मका पुरुष रहेका छन् । उनीहरुमध्ये १३ जना नरैनापुरका रहेका छन् । उनीहरुका भेरी अस्पतालमा परीक्षण गरिएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन् । यसअघि शुक्रवार बिहान मन्त्रालयले ३० जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएको बताएको थियो। त्यस्तै, नेपालका ४० वटा जिल्लामा कोरोना फैलिसकेको छ ।
सुसील कोइराला प्रखर अस्पताल, नेपालगञ्जबाट आज २१ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । जसमा महिला ९ जना पुरुष १२ डिस्चार्ज भएका छन् । उनीहरु १ वर्षदेखि ६० वर्षसम्मका रहेका प्रवक्ता देवकोटाले जनाएका छन् । उनीहरु १७ देखि २० दिनपछि डिस्चार्ज भएका हुन् । यससँगै ७० जना कोरोना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।
नेपालमा कोरोना संक्रमित एक हजार ४०१ पुगे, २१९ जना निको
काठमाडौँ, १७ जेठ । नेपालमा आज (शनिवार) एकैपटक १८९जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
क्वारेन्टाइनबाट भाग्न थालेपछि मोरङमा फ्रि वाइफाइको सुविधा
मोरङ, १७ जेठ । क्वारेन्टाइनमा बेसेकाहरु धमाधम भाग्न थालेपछि मोरङमा सुविधा थपिएका छन । क्वरेन्टाइनमा
कोरोनाबाट खाडी मुलुकमा १ हजार बढि नेपालीको मृत्यु
काठमाडौं, १७ जेठ । लाखौं नेपालीहरु कार्यरत खाडीका ६ मुलुकमा कोरोना भाइरसले १ हजार ३
कोरोना भाइरसः सप्तरीमा थप ९ जनामा संक्रमण, आइसोलेसनको अभाव
सप्तरी, १७ जेठ । सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा एक महिलासहित ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको